Boom ee alaabada xashiishka ayaa bixin kara iibka sanadlaha ah ee 690 XNUMX Milyan ee Boqortooyada Midowday • Dawooyinka Inc.eu
Kobcinta wax soo saarka Cannabis waxay soo saari kartaa iibin sanadle ah oo ah 690 XNUMX milyan oo Boqortooyada Ingiriiska
Iibka ayaa lafilayaa inuu labalaabmi doono, iyadoo la sheegayo in dalabku sii kordhayo culeyska iyo hubanti la’aanta ay sababtay faafida. Kacaanka xashiishadda ee leh alaabada xashiishadda aan la tirin karin ayaa ololaynaya mala-awaalka.
Iibinta alaabada xashiishadda ee macaamiisha ayaa kor u kacay intii lagu jiray aafada, taas oo kordhisay caannimadeeda cannabinoids suuqa fiitamiinnada B iyo C oo wadajir ah ayaa ka bixi doona, kooxaha warshadaha ayaa sidaas yidhi. Warshadaha ayaa ku qiyaasaya in suuqyada alaabada ay ku jiraan waxyaabaha xashiishka laga soo saaro ay gaari doonaan £ 690 milyan sanadkan, in ka badan laba jibaar £ 314 milyan oo iibka ah ee sanadka 2019. Cadaadiska iyo hubanti la'aanta ay keentay cudurka faafa ayaa loo aaneynayaa xiisaha sii kordhaya ee cannabinoid iyo xashiishka alaabta.
1 Kacaanka xashiishka sharciga ah
2 Sharciyada xashiishka ayaa dib u dhac ku yimid
3 Muhiimadda dhaqaale ee suuqa xashiishadda
Kacaanka xashiishka sharciga ah
Caan ka noqoshada alaabada ay ku jiraan cannabinoids, sida CBD (cannabidiol), waa Boqortooyada Ingiriiska hadda waa suuqa labaad ee macaamiisha ugu badan marka laga reebo Mareykanka. Waxyaabaha noocan oo kale ah waxaa ka mid ah saliidda CBD, oo ay ku amaanaan kuna sharfeen tafaariiqleyda saamaynta nasteexo iyo qoyaanka. Warbixin cusub, ayaa Ururka Warshadaha Cannabinoid iyo Xarunta Cannabis Caafimaadka dowladda inay wax ka qabato sidii looga faa’iideysan lahaa fursad dhaqaale.
Sharciyada xashiishka ayaa dib u dhac ku yimid
Waxay ku doodayaan in sharcigu uusan la jaanqaadi karin koritaanka suuqa. Waqtigaan la joogo, Wakaaladda Heerarka Cunnada ayaa nidaamisa wax soo saarka CBD, halka Wasaaradda Arrimaha Gudaha ay wado tijaabo si loo helo wax la aqbali karo THCheerarka, taasi waa, kiimikada cilmu-nafsiga ee laga helo xashiishka.
Laakiin xayiraadaha ku saabsan beerista hemp, qaraabada geedka xashiishka oo ay sidoo kale ku jiraan cannabinoids, waxay la macno tahay in faa'iidooyinka badankood ay aadaan dibadda. Taasi waa sababta oo ah Wasaaradda Arrimaha Guduhu waxay bixisaa oo keliya ruqsadaha wax-beerista laba sababood awgood: maaddo ceyriin ah oo loo isticmaalo warshadaha, ama tijaabooyinka dawooyinka dawooyinka ama soo-saarista dawooyinka shatiga loo haysto.
Haddana cannabidiol-ka laga soo saaray dhirta waligiis ma noqon walax la kantaroolo oo suuqa waxsoosaarkaas ayaa aad uga ballaaran kan labadaas isticmaal. Taasi waxay ka dhigan tahay in lagu iibin karo Boqortooyada Midowday (UK), in kasta oo dhirta laga soo saaray aan lagu beeri karin halkan - haddii uusan jirin isbeddel xagga sharciga ah mooyee.
Muhiimadda dhaqaale ee suuqa xashiishadda
Steve Moore, oo ah aasaasaha Ururka Warshadaha Cannabinoid (ACI) & Xarunta Xashiishadda Daawada (CMC) wuxuu yiri: "Taageerada dowlada cusub, oo u oggolaaneysa CBD iyo alaabada xashiishka in laga heli karo waddo kasta oo laga dukaameysto ee UK, kacaanka xashiishadda ee macaamiisha wuxuu noqon karaa mid joogto ah. Tani waxay abuuri kartaa boqolaal ganacsi oo cusub iyo kumaan kun oo shaqo ah waxayna kasbataa balaayiin rodol dhoofinta.
Akhri wax dheeraad ah wararka.sky.com (Source, EN)
cannabisbeerista cannabisCBDsaliid cbdediblesxagasha
Dawladdu waxay dhiirrigelinaysaa xashiishadda oo ah dalag lacageed oo loogu talo galay beeralayda dalka iyo sidii ...
Daraasad: Isticmaalka xashiishka da'da yar ee aan la xiriirin hoos u dhaca garashada
Sigaar cabista da 'yarta ah si xun uma saameynayso fakarka iyo fikirka, wax yarna ...
Halyeeygii dalka (iyo qeybiyaha xargaha xashiishadda Kush) Willie Nelson wuxuu leeyahay shirkadiisii ​​ugu dambeysay ...